Look out for others | Kent Prepared
आफ्नो सुरक्षा गर
आपतकालिनको लागि तयारी गर्दै
तयार हुनुहोस् - द्रुत सुझावहरू
आपतकालीन अवस्थामा के गर्ने
घरायसी योजना बनाउनुहोस्
आपतकालीन झोला प्याक गर्नुहोस्
अरूको लागि हेर्नुहोस्
समुदाय लचिलोपन निर्माण
उपयुक्त बीमा प्राप्त गर्नुहोस्
के हुन्छ भने?
अत्यधिक चिसो / हिउँ
ग्रीष्म गर्मीको लहर
ग्यास आपूर्तिमा कमी
आफ्नो व्यापार सुरक्षित गर्नुहोस्
व्यापार निरन्तरता योजना
तपाईंको व्यवसायको तयारी गर्दै
केन्ट सामुदायिक जोखिम दर्ता
धेरै उच्च जोखिम
हाम्रा स्वयंसेवक साझेदारहरू
केन्टमा EU निकास
EU निकास व्यापार सल्लाह
केन्ट यात्रा सल्लाह
छवि ग्यालेरी मुख्य
कोरोनाभाइरस (कोभिड -19)
Covid-19 व्यापार समर्थन
Covid-19 PPE अनुरोध लाइन
विद्यालयहरूको लागि Covid-19 PPE मार्गदर्शन
याद गर्नुहोस् केही व्यक्तिहरूलाई अरू भन्दा बढी मद्दत चाहिन्छ
आपतकालिन अवस्थामा, केहि व्यक्तिहरू अरू भन्दा बढी कमजोर हुन्छन् - उदाहरणका लागि, वृद्ध, धेरै जवान वा असक्षम।
सधैं आफ्नो परिवार र आफैलाई पहिले विचार गर्नुहोस्। तर तपाईंका साथीहरू र छिमेकीहरूलाई तपाईं जहाँ सक्नुहुन्छ मद्दत गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरू ठीक छन् भनी जाँच गर्दै, अतिरिक्त कम्बलहरू उपलब्ध गराउने, आपूर्तिहरू सङ्कलन गर्ने वा कुराकानी गर्नाले पनि संसारमा भिन्नता ल्याउन सक्छ।
'आकस्मिक साथीहरू' राख्नुहोस्
आपतकालिनका लागि तयारी गर्ने एउटा सजिलो तरिका 'आपतकालीन साथीहरू' पहिचान गर्नु हो।
आकस्मिक साथीहरू तपाईंले विश्वास गर्नुहुने व्यक्तिहरू हुन् जसले तपाईंलाई वास्तवमै आवश्यक पर्दा मद्दत उपलब्ध गराउन सक्छन्। तपाईंले नजिकै बस्ने कम्तिमा एक आपतकालीन साथी र अर्को टाढा बस्ने एक जनालाई चिन्नुपर्छ।
आकस्मिक साथीहरूले तपाईंलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने कुरा यहाँ छ:
एउटा अतिरिक्त घरको चाबी समात्दै। तपाईलाई कहिले थाहा हुँदैन कहिले तपाई आफैंलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, वा यदि तपाई घरबाट टाढा हुनुहुन्छ भने तपाईका घरपालुवा जनावरहरूलाई खुवाउन आवश्यक छ।
यदि तपाईं खाली हुनुहुन्छ वा तपाईंको घर बाढी, आगलागी वा उपयोगिता विफलताबाट प्रभावित भएमा बस्नको लागि ठाउँ उपलब्ध गराउने।
आफ्ना बालबालिकाको हेरचाह गर्ने वा उनीहरूलाई विद्यालयबाट उठाउने।
महत्त्वपूर्ण कागजातहरू वा चित्रहरूको प्रतिलिपिहरू सुरक्षित गर्दै।
आपतकालिन अवस्थामा अलग हुन सक्ने परिवारका सदस्यहरूका लागि सम्पर्क बिन्दुको रूपमा काम गर्दै।​
तपाईंका सबै परिवारलाई तपाईंका आपत्‌कालीन साथीहरू को हुन्‌ भनी थाहा छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्, र तिनीहरूलाई तपाईंको घरको आपत्‌कालीन योजनामा नोट गर्नुहोस्।
नबिर्सनुहोस् - तपाईं कसैको आपतकालीन साथी पनि हुन सक्नुहुन्छ। तपाईंले एकअर्कालाई मद्दत गर्न सक्ने सबै तरिकाहरू पहिचान गर्न कुराकानी गर्नुहोस्।
आपतकालीन सूचना योजनाहरू
आपातकालीन अवस्थामा चिकित्सा र व्यक्तिगत जानकारी पहुँचयोग्य हुनु महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यो गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। यहाँ एक जोडी छ:
मेडिकल आईडी ब्रेसलेटहरू - खुद्रा विक्रेताहरूबाट उपलब्ध।
बोतल योजनामा सन्देश - थप जानकारीको लागि आफ्नो स्थानीय लायन्स क्लबलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाईंको मोबाइल फोनको आपतकालीन खण्डमा तपाईंको चिकित्सा जानकारी भण्डारण गर्दै।
जोखिममा परेका बासिन्दाहरूको लागि निःशुल्क प्राथमिकता सेवाहरू दर्ता
कहिलेकाहीँ तपाईं, वा तपाईंले चिनेको कोही, विशेष गरी पानीको कमी वा बिजुली आउट भएको अवस्थामा केही थप सहयोग चाहिन्छ। पानी, ग्यास र बिजुली कम्पनीहरूले मद्दतको लागि निःशुल्क प्राथमिकता सेवाहरूको दायरा प्रस्ताव गर्छन्।
यो आवश्यक हुँदा अतिरिक्त समर्थन प्राप्त गर्नुहोस् धेरै जसो तपाईको उपयोगिता कम्पनीको हस्ताक्षर गरेर नि: शुल्क प्राथमिकता सेवाहरू दर्ता।
कसले थप समर्थन प्राप्त गर्न सक्छ?
यदि तपाइँ चिकित्सा उपकरणहरूमा भर पर्नु हुन्छ
यदि तपाइँसँग फ्रिजमा औषधि छ भने
यदि तपाईलाई गम्भीर वा पुरानो रोग छ भने
अशक्तता छ भने
यदि तपाइँ वा तपाइँको हेरचाह गर्ने कोही डिमेन्सिया संग बाँचिरहेको छ
यदि तपाइँ पेन्सन योग्य उमेरको हुनुहुन्छ भने
यदि तपाईको घरमा पाँच मुनिका बालबालिका छन् भने
यदि तपाईंलाई छोटो समय अवधिको लागि अतिरिक्त सहयोग चाहिन्छ भने (जस्तै यदि तपाईं चिकित्सा उपचारबाट निको हुँदै हुनुहुन्छ भने
थपको लागि जानकारी र प्राथमिकता सेवा दर्तामा साइन अप गर्न आफ्नो उपयोगितामा जानुहोस् कम्पनीको वेबसाइट।
​ यो भिडियो हेरेर प्राथमिकता सेवा दर्ता र उपलब्ध निःशुल्क समर्थन बारे थप जान्नुहोस्
कल गर्नुहोस्: 01622 212409
केन्ट लचिलोपन फोरम
केन्ट फायर र उद्धार सेवा मुख्यालय
स्ट्र मिल हिल
टोभिल, मैडस्टोन ME15 6XB